थाहा खबर: जँड्याहा बाबुका छोरा रोनाल्डो, जसले कहिल्यै रक्सी पिएनन्
छोरासँग क्रिष्ट्रियानो रोनाल्डो
उनी रोनाल्ड रेगनका ठुला फ्यान थिए। आफ्नो छोरा रोनाल्डजस्तै विश्‍वप्रसिद्ध बनेको हेर्न चाहन्थे। सधैँ रक्सी पिइरहने डिनिस एभिरोलाई छोराले कुनै दिन ठुलै काम गर्नेछ भन्‍ने लाग्थ्यो। तर रक्सी पिउने समस्याले उनको पुरा परिवार पीडित थियो। छोराछोरीले राम्रो स्कुलमा पढ्न पाएनन्। २ छोरा र २ छोरीलाई हुर्काउन श्रीमती मारिया डोलोरेसले निकै संघर्ष गर्नुपर्‍यो।
‘मेरो छोरा कुनै दिन विश्‍वकै उत्कृष्ट खेलाडी बन्‍नेछ। रक्सी धोकेर उनले यसो भनिरहदाँ हामी निकै हाँस्थ्यौैं।’ डिनिसका पुराना साथी मार्टिन्स् भन्छन्,‘हामी उनलाई सधै मुर्ख भन्थ्यौं। तर उनी सधैं यही कुरा गर्थे।’
डिनिस एभिरो एन्डोरिना नामक फुटबल क्लबमा चेन्जिङ रुम सफा गर्ने तथा सामान ओसार पसार गर्ने काम गर्थे। उनैले कान्छा छोराको नाम क्रिष्ट्रियानो रोनाल्डो जुराए। रोनाल्डोले ८ वर्षको कलिलो उमेरमा यही क्लबबाट फुटबल खेल्न थाले। उनले आजसम्म आइपुग्दा चार पटक बेलोन डि अर तथा ३ पटक फिफा वर्ष खेलाडीको अवार्ड जितिसकेका छन्। करियरमा ५ सयभन्दा धेरै गोल गरिसके।
एकपटक स्पेनिस छोटो दुरीका धावक एन्जेल डेभिड रोड्रिग्वेजलाई दौडमा पछि पारेका थिए। ६ फिट १ इन्च अग्ला रोनाल्डोको शरिरमा १० प्रतिशत मात्रै बोसो छ। उनको ओजन ८० किलो छ।
रोनाल्डोलाई आफ्ना दुई दिदी तथा दाजु हुगोले निकै माया गर्थे। उनी टोलभरी चर्चित थिए। चर्चित हुनुको कारण स्कुल फुटबलमा उनले गर्ने उत्कृष्ट प्रदर्शन थियो।
१० वर्षको उमेरमा उनले नासियोनल नामक स्थानीय क्लबसँग सम्झौता गरे। क्लबलाई उपाधि जिताइसकेपछि अर्को वर्ष स्पोर्टिङ सिपिले ट्रयालमा बोलायो। ट्रयाल पास भएपछि रोनाल्डो क्लबको युवा टिमका लागि छानिए।
अब रोनाल्डोको ख्याति बढ्न थाल्यो। घरको माया पाएका रोनाल्डोले समाजको माया पाउन थाले। स्कूलमा उनलाई मन पराउने किशोरीहरुको संख्या बढ्यो। केटीहरुसँगको बढ्दो हिमचिमकै कारण रोनाल्डोले पटक–पटक शिक्षकको चुटाई भेट्न थाले। झोँक्की रोनाल्डोले एकपटक त शिक्षकमाथि नै कुर्सी प्रहार गरे। परिणाम, उनी निलम्बनमा परे।
अत्याधिक रक्सी पिउने उनका बाबु डिनिस छोराले राम्रो फुटबल खेलेको देखेर दंग थिए। तर रोनाल्डोलाई बाबुको स्वभाव कहिल्यै मन परेन। अन्तरवार्ताका क्रममा रोनाल्डोले भनेका छन्,‘उनले रक्सी पिएर चिच्याउँदा हाम्रो हाँसो फुट्थ्यो। उनी सधैं निराश देखिन्थे। तनावमा हुन्थे। तर उनलाई के तनाव थियो भन्‍ने थाहा भएन।’
रोनाल्डो भन्छन्,‘म फरक खालको बाबु चाहन्थे। जो मेरो सफलतामा खुसी हुन सकोस्।’
रोनाल्डोले म्यानचेस्टर युनाइटेडबाट खेल्न थाले। बाबुले रक्सी छाडेनन्। रक्सी पिउनका लागि पैसा जुटाउन डिनिसले छोराका जर्सीहरु बेच्‍न थाले।
‘मेरा बाबु अस्पतालमा थिए। त्यतिबेला प्रिमियर लिग चलिरहेको थियो। मैले प्रशिक्षक एलेक्स फर्गुसनलाई भने। उनले मलाई विदा दिदैं भनेका थिए, तिम्रो लागि परिवार पहिलो कुरा हो। त्यसपछि मात्रै फुटबल। मैले उनी जत्तिको अरुको समस्या बुझ्‍ने व्यक्ति सायदै भेटे।’ रोनाल्डोले फर्गुसनको सम्मानमा भनेका छन्।
रोनाल्डो सर्वाधिक धेरै आम्दानी गर्ने फुटबलर मात्रै होइनन्। उनी समाजसेवामा धेरै खर्च गर्ने खेलाडी समेत हुन्। उनले केही समयअघि १० महिनाका एक बालकको ब्रेन सर्जरी गराइदिन आफ्नो बुट र हस्ताक्षरसहितको जर्सी बेचेका थिए।
रोनाल्डोको पटक–पटकको अनुरोधका बाबजुद डिनिसले रक्सी छाडेनन्। रोनाल्डोले उनलाई रिह्‍याबमा समेत लैजान खोजेका थिए। तर डिनिस मानेनन्।अत्याधिक रक्सी सेवनकै कारण सन् २००५ मा डिनिसले ज्यान गुमाए।
गडफादर एलेक्स फर्गुसन, दोस्रो घर म्यानचेष्टर युनाइटेड
म्यानचेष्टरको युवा टोलीका पूर्व प्रशिक्षक माइक क्लेग भन्छन्,‘उनको महान् यात्रा त्यतिबेलै सुरु भयो। जतिबेला उनी म्यानचेष्टर युनाइटेड आए। आफ्नो योजना र लक्ष्यलाई दिन–दिनै सफल बनाए।’ क्लेग थप्छन्,‘रोनाल्डोलाई प्रकृतिले नै क्षमता दिएको थियो,उनी कालो पत्थरभित्रका हिरा थिए। त्यसैलाई हजारौ‘–हजार घण्टासम्म घोटेर चमक देखाए।’
एलेक्स फर्गुसनले रोनाल्डोलाई आजको दिनसम्म पुर्‍याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। उनी रोनाल्डोलाई कडा अनुशासनमा राख्‍ने गर्दथे। क्लेग भन्छन्,‘हरेक सिजन फर्गुसनले रोनाल्डोलाई गोल गर्ने जिम्मेवारी दिन्थे। उनलाई सन् २००५ मा १० र सन् २००६ मा १५ गोल गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।’ तर रोनाल्डोले सन् २००६ को सुरुआतमा १२ तथा सन् २००७ को सुरुआतमा २३ गोल गरिसकेका थिए।
सन् २००७–०८ को सिजन रोनाल्डो र फर्गुसन दुबैका लागि महत्वपूर्ण रह्यो । रोनाल्डोले ४२ गोल मात्रै गरेनन् , म्यानचेष्टर युनाइटेडलाई च्याम्पियन्स लिग, प्रिमियर लिग र एफए कपको उपाधि समेत जिताए। त्यसै वर्ष उनले पहिलो पटक फिफा वर्ष खेलाडीको अवार्ड जिते। रोनाल्डोले म्यानचेष्टरमा छदॉ २ सय ९२ खेल खेल्दै १ सय १८ गोल गरे । उनले त्यसक्रममा क्लबलाई प्रमुख ९ उपाधि जिताए।
गत वर्षमात्रै एलेक्स फर्गुसनले आफुले प्रशिक्षण दिएका खेलाडीमध्ये क्रिष्ट्रियानो रोनाल्डो सर्वाधिक उत्कृष्ट रहेको बताएका थिए।‘मैले प्रशिक्षण गराएका खेलाडीमध्ये चारजना मात्रै विश्वस्तरका थिए। एरिक क्यान्टोना, रायन गिग्स, पाउल स्कोल्स र क्रिष्ट्रियानो रोनाल्डो। त्यसमध्ये रोनाल्डो सर्वाधिक उत्कृष्ट हुन्।’ फर्गुसनले भनेका छन्।
म्यानचेस्टर युनाईटेडका पूर्व कप्तान रायन गिग्स रोनाल्डो निकै अनुशासित र मेहिनती खेलाडी रहेको बताउँछन्।‘सन् २००७ ताका नानी र एन्डरसन पनि रोनाल्डोजस्तै उत्कृष्ट थिए। तर उनीहरु सर्वाेत्कृष्ट बन्‍न सकेनन्।’ गिग्स भन्छन्,‘रोनाल्डो उनीहरुभन्दा मेहिनती थिए। उनी नियमित अभ्यास सुरु हुनभन्दा एक घण्टाअघि नै मैदान आइपुग्थे। एक्लै पनि अभ्यास गर्थे।’
रियाल म्याड्रिड आएपछि सफलताको ओइरो
क्रिष्ट्रियानो रोनाल्डोले क्लब फुटबलमा जित्‍नुपर्ने उपाधि सबै म्यानचेस्टरमै जितेका थिए। उनले म्यानचेस्टरबाट ३ पटक इंलिस प्रिमियर लिग तथा २ लिग कपसहित च्याम्पियन्स लिग, क्लब विश्वकप र एफएकप जिते। रोनाल्डो युनाइटेडमै छदाँ फिफा वर्ष खेलाडी घोषित भए।
युनाइटेडबाट विश्वकिर्तिमानी मुल्यमा रियल म्याड्रिड सरुवा भएपछि उनको तुलना बार्सीलोनाका लियोनल मेसीसँग हुदैं आएको छ। रोनाल्डोले यसबीच रियल म्याड्रिडबाट २ पटक च्याम्पियन्स लिग तथा १ पटक स्पेनिस ला-लिगा जिते। उनले थप २ पटक फिफा वर्ष खेलाडीको अवार्ड हासिल गरे। यसपटक बेलोन डि अर जितेका रोनाल्डोले फिफा वर्ष खेलाडीको उपाधि जित्‍ने संभावना बलियो छ। उनी रियल म्याड्रिडको इतिहासकै सर्वाधिक गोलकर्ता हुन्।
यस सिजन उनले ४२ खेल खेल्दै ३८ गोल गरे। १४ पास उपलब्ध गराए। रियललाई च्याम्पियन्स लिग फुटबल प्रतियागिताको उपाधि जिताए। रोनाल्डोले सन् २०१४ मा पनि रियललाई च्याम्पियन्स लिग जिताएका थिए। उनले सन् २०२१ सम्म रियल म्याड्रिडमै बस्‍ने सम्झौता गरेका छन्। सम्झौता समाप्त हुँदासम्म उनको उमेर ३६ वर्षको हुनेछ। जुन उमेरमा अधिकांश खेलाडीले माथिल्लो डिभिजनको फुटबल खेल्न सक्दैनन्। तर रोनाल्डोले सबैलाई च्यालेन्ज गरेर भनेका छन्,‘म ४० वर्षको हुदाँसम्म सक्रिय फुटबल खेल्नेछु।’
फिट हुनुको रहस्य
१५ वर्षकै उमेरमा रोनाल्डो ‘रेसिङ हर्ट’ नामक मुुटु सम्बन्धि रोगबाट पीडित भए। उनको मुुटुको धड्कन सामान्य मानिसको भन्दा धेरै गुणा बढी चल्थ्यो। यस रोगका कारण उनले फुटबल छाड्नुपर्ने बताइएको थियो। तर उपचारपछि सबै ठीक भयो। त्यतिबेलाको घटना संझदैं आमा डोलोरेस भन्छिन्,‘म आत्तिएको थिएँ। तर रोेनाल्डोलाई कुनै चिन्ता थिएन। उसले उपचार सकिएको छोटो समयमै फुटबल सुरु गर्‍यो।’
उपचारपछि रोनाल्डोको दौडने क्षमता अझै बढेको छ। उनी कहिल्यै थाक्दैनन्। उनले एकपटक स्पेनिस छोटो दुरीका धावक एन्जेल डेभिड रोड्रिग्वेजलाई दौडमा पछि पारेका थिए। ६ फिट १ इन्च अग्ला रोनाल्डोको शरिरमा १० प्रतिशत मात्रै बोसो छ। उनको ओजन ८० किलो छ।
म्यानचेस्टरमा छँदा एलेक्स फर्गुसनले सिकाएको कडा अनुशासन आफु फिट हुनुको रहस्य रहेको रोनाल्डो बताउँछन्,‘राम्रो फुटबलर बन्‍न सधैं १०० प्रतिशत तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ भन्‍ने उनले सिकाए। कतिबेला खाने? कतिबेला सुत्‍ने? आफ्नो ख्याल नगरेसम्म राम्रो फुटबल बन्‍न सकिदैंन,’ रोनाल्डोले भनेका छन्।
अहिले उनी रियल रियल म्याड्रिडको भाल्डेबेवास मैदानमा सातामा ५ दिन अभ्यास गर्छन्। उनी औसतमा दैनिक ३–४ घण्टासम्म अभ्यास गर्छन्। समयमै सुत्छन्। समयमै उठ्छन्। रोनाल्डो संगीतका पारखी हुन्। उनी अभ्यासको समयबाहेक अन्य समयमा दिमागलाई शान्त राख्‍न संगीत सुन्छन्। ‘आनन्ददायक जीवनशैली बाँच्‍नसके तपाईले सधैं आफुलाई शारिरीक तथा मानसिक रुपमा फिट राख्‍न सक्नुहुन्छ। म फूर्सदको समय परिवार र साथिभाईसँग बिताउँछु। उनीहरुसँग सकारात्मक कुरा गरेर दिमागलाई सकारात्मक राख्छु,’ समर्थकहरुलाइ रोनाल्डोले भनेका छन्।
रोनाल्डोले चितुवाको भन्दा ५ गुणा बढी शक्तिमा जम्प गर्न सक्छन्। बास्केटबलको सबैभन्दा ठूलो लिग एनबिएमा खेल्ने औसत खेलाडीहरुभन्दा उनी राम्रो जम्प लगाउँछन्। तयारीका क्रममा रोनाल्डोले २३ हजार ५५ केजी भार उठाउने गरेका छन्।
सन् २०१६ करियरमै उत्कृष्ट वर्ष
यो वर्ष रोनाल्डोका लागि आफ्नो करियरकै उत्कृष्ट वर्ष रह्‍‍यो। यसै वर्ष उनले रियल म्याड्रिडलाई च्याम्पियन्स लिग जिताए। त्यसको छोटो समयपछि पोर्चुगललाई आफ्नै कप्तानीमा युरोकप फुटबलको उपाधि जिताए। पोर्चुगलले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको उपाधि जितेको यो पहिलो अवसर थियो। रोनाल्डोले प्रतियोगितामा ३ गोल गरे। उनले यसअघि सन् २००४ को युरोकपको फाइनलसम्म पोर्चुगललाई पुर्‍याउन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए। सन् २००६ को विश्वकपमा लुईस फिगोको कप्तानीमा पोर्चुगल सेमिफाइनल पुग्दा रोनाल्डो टोलीका महत्वपूर्ण खेलाडी थिए। फ्रान्सेली म्यागेजिनले प्रदान गरेको बेलोन डि अर जितेपछि रोनाल्डोले भनेका छन्,‘पोर्चुगललाई उपाधि जिताउन सके। त्यसैले वर्ष २०१६ मेरो करियरकै सर्वोत्कृष्ट वर्ष हो।’
ट्याटु खोपेका छैनन्, रक्सी पिउदैनन्
अन्य फुटबलरजस्तो उनले ट्याटु खोपेका छैनन् किनकी उनी नियमित रक्तदान गर्छन्। रोनाल्डो कहिल्यै धुम्रपान र रक्सीसेवन गर्दैनन्। आफ्ना बाबुको निधन रक्सी सेवनकै कारण भएकाले अल्कोहलबाट टाढै रहने प्रण उनले गरेका छन्।
रोनाल्डोका एक छोरा छन्। तर उनी अविवाहित छन्। उनले आफ्नो छोरालाई आमाबाट टाढै राखेका छन्।
इन्डोनेशियामा सन् २००४ मा आएको भूकम्प र सुनामीपछि पीडित परिवारलाई सहयोग गर्न रोनाल्डो अघि सरेका थिए। उनले आफ्नो जर्सी, बुट लगायत बेचेर प्राप्त आम्दानी समाजसेवामा लगाउने गरेका छन्। उनले प्यालेस्टाइनको गाजाँपट्टीका स्कुले बालबालिकाको सहयोगका लागि सन् २०११ मा जितेको गोल्डेन बुट बेचे।
Aayush Deep Rijal
j payo tei lekhne, ronaldo le kahile raksi piyena re? tanna piyera parking ma rakheko car ma kasle susu garya ho? maile ho? bau marepaxi matra khana xodya ho tyo vnda agadi ko ta namud jadya ho.